China Conical kaviri-sikuruu extruder Kugadzira uye Fekitori | Jiarui
Conical mapatya-sikuruu extruder imhando yeakanyanya kushanda musanganiswa extruding muchina. Iwo maficha eakadai extruder anotevera: kudzika kwekugera kumhanya, zvinhu zvakaoma kuora, kusanganisa zvakaenzana, kugadzikana kwemhando yepamusoro, kugona kwakanyanya, kushanda kwakawanda uye hupenyu hwakareba hwebasa, nezvimwe. , kunyanya yakaomarara poda yePVC mupombi, bhodhi, jira, firimu kana chimiro, nezvimwewo.
Iyo extruder yakagadziriswa nekukanganisa kudzivirirwa, kuwandisa alarm, sikuruu yenguva dzose tembiricha mafuta kutenderera system, dhiramu mafuta kutonhora system, vharuvhu yekurasa pombi uye mupiro wekudyisa mudziyo.
Kune akawanda marudzi emagetsi ekudzora system yekusarudza (semuenzaniso: PLC auto control system). Inotyairwa nemota yeDC. Kuburikidza ne inverter kana DC yekumhanyisa regulator inogona kuwana yakatsiga isina nhanho kumhanyisa kugadzirisa, kukwirira kwakaringana uye simba rekuchengetedza Akangwara maviri anoratidza edhijitari tembiricha controller inoshandiswa kugadzirisa kudzora kunyatso uye kupisa tembiricha.
Conical mapatya-sikuruu extruder akateedzana conical twin screw extruder inowanzo kuverengerwa dhiramu sikuru, giya kutapurirana system, huwandu hwekupa, yekuzorora, kupisa, kutonhora uye emagetsi ekudzora zvikamu Etc. Iyo conical twin screw extruder yakakodzera kuburitsa zvigadzirwa zvePVC kubva muhupfu hwakakanyiwa .
Icho chakakosha michina yePVC poda kana WPC poda extrusion. Iine zvakanakira kubatanidzwa kwakanaka, kuburitsa kukuru, kumhanya kwakadzikama, hupenyu hwakareba hwebasa. Iine michina yakasiyana uye yekudzika michina, inogona kuburitsa mapaipi ePVC, masiringi ePVC, maficha ePVF ewindo, PVC jira, WPC decking, PVC granules zvichingodaro.
Yakasiyana huwandu hwesikirini, sikuruu extruder ine maviri screws, sigle sikuru extruder ine chete sikuruu, Dzinoshandiswa kune zvakasiyana zvinhu, zvakapetwa sikuruji extruder inowanzo shandiswa kune yakaoma PVC, imwechete sikuru inoshandiswa PP / PE. Double screw screw extruder inogona kuburitsa pombi dzePVC, profiles uye granules dzePVC. Uye isina kuroora extruder inogona kuburitsa PP / PE pombi uye granules.
Iyo extruder inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzinotevera:
Inokodzera PVC, UPVC upfu
Maitiro pombi, ndiro, jira, chimiro pamwe nemagirosa
Screw inotenderera kumhanya (r / min)
Kubuda (Kg / h)
Pashure: Imwe screw extruder
Zvadaro: PVC pombi yekugadzira mutsara
PP PE Firimu Pelletizing Mutsetse
Kaviri Shaft Shredder